Reer Maakhir ayaan garanayaa. | allsanaag
Reer Maakhir ayaan garanayaa.
Dhismaha sawirkan hoose waa magaala xeebeedka Laas Qoray. Dabaqyadan aad arragto waxay ka mid yihiin dhismayaasha taariikhiga ah. Maamulka Saldanada Maakhir, halka dawladaha adduunku leeyihiin “Villa Somalia” iyo “White house”, xilligaa waxa “Guriga Cad” ee Warsangeli loo yaqaaney SHAACA. Magaca SHAACA ee goobta gudoonka ka dhacayo loo yaqaaney waxay ku tusinaysaa deganaanta maamulka Ardaaga Odayaasha Warsagengeli iyo gudoonkooda. Waxay muujineysaa in Reer Maakhir ka gudbeen xilli ay geed hoos fariistaan oo wada-tashigooda ku qabsadaan oo gaadheen iney dhistaan dabaqyo ay arrimahooda kaga wada hadlaan oo uu maamulkoodu ka soo baxayo sida “Guriga Cad” iyo “Villa Somalia.” Halka Soomaaliya guriga looga taliyaa, waa “VILLA SOMALIA”, xambaarsan yahay macne guumeysi Talyaani muujinaya kan Reer Maakhir looga talin jiray wuxuu xambaarsanaa bandiirad xornimo iyo gumeysi la’aan ku saleysan macne qoto dheer iyo ujeedo culus oo ah nuurkii caddaalada iyo golahay sinaantu ka soo shaaceysey ama iftiimeysey. Sidaasaa Saldanada Maakhir goobtaOdayaasha Ardaaga Warsangeli iyo Gudoonkoodutalada ku goyn jireen loogu bixiyey“SHAACA” oo ah “Guriga Cad” ee Maakhir.
← Dagaalka Warbaahineed ee SNM Amin Caamir imisa lacag ah ayaa Sawirkan lagu siiyey? →